Hlola Iziqhingi Solovetsky, Russia - World Tourism Portal
Hlola Iziqhingi ZaseSolovetsky, eRussia
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeSolovetsky
Bukela ividiyo ekhuluma ngeSolovetsky
Hlola iziqhingi zaseSolovetsky, iqembu leziqhingi oLwandle Olumhlophe e-Arkhangelsk Oblast. Luyiparele leqiniso le Russian enyakatho.
Iziqhingi zaseSolovetsky, noma iSolovki, ziyisiqhingi esiseLwandle Olumhlophe, amakhilomitha angaphansi kwe-Arctic Circle. Zidume kakhulu ngesigodlo sazo seSolovetsky, into ye-15th century UNESCO World Heritage uhlu lwama 1th, kodwa izivakashi nazo zingathokozela indawo ebabazekayo yemvelo yasenyakatho engaxutshwe nalutho lwenkolo neyasendulo. Okokuqala kwabo kukhona ama-labyrinths amatshe akhiwe nge-2st-XNUMXnd century AD ngesiko lasendulo elingaziwa. Ezakamuva zakhiwa ngesikhathi sikaStalin, lapho isigodlo sezindela saseSolovetsky sixoshwa yiBolsheviks futhi sisetshenziswa njengekamu le-GULAG. Ngemuva kokuwa kwe-USSR isigodlo sezindela sabuyiselwa eSontweni Lobu-Orthodox LaseRussia, sabuyisela indima yaso endaweni engcwele yezwe futhi saba indawo yezivakashi eziningi nezihambi. Le nhlanganisela engokomoya, ihlane nokuchitha kwegazi okwedlule kweSolovki ngeke kushiye muntu ongenandaba.
Iziqhingi zinabantu abambalwa, kepha izindawo zabo zokuhambela izivakashi ziyakwazi ukwamukela izivakashi ezahlukahlukene, kusukela ngamakamu kuze kufike ezivakashini zokuqala. Uhambo olujwayelekile luthatha izinsuku ze-3-4 futhi lenziwa kangcono ehlobo phakathi nenkathi yelanga phakathi kwamabili. Imimoya ebandayo kanye nezinkulungwane zomiyane kuyinselele.
Ikhaya eliyimfihlakalo lezindela nezindela, abapristi nezidenge ezingcwele, iSolovetsky ifanekisela isikhathi esedlule ngokomoya saseRussia. Izinkumbulo zamakamu kaStalin odume kakhulu we-GULAG akhuluma ngezikhathi zobumnyama.
Isiqhingi Esikhulu Solovetsky
ISilovetsky Isigodlo. Uhlu lobungcweti bezakhiwo zomhlaba wonke we-UNESCO. Ukwakha kuqala i-15th. C. Izindela zivalwe ngo-1920 ekubeni yindawo yokuboshwa. Bheka i-Holy Gates, Cathedral yokuguqulwa isimo, iSonto Lokucatshangwa, ISonto laseNikolskaya, iSonto Lokumemezela kanye ne-Rectory Complex.
Izingadi ze-Botanical & Makaryevskaya Hermitage
Inkampani yendawo "IWarff Ltd." (iwebhusayithi ngesiRussia, kepha ungasebenzisa ukuhumusha kwe-google ukuyibona ngesiNgisi) isebenza ngemikhumbi nsuku zonke phakathi kweRabocheostrovsk neSolevki Islands njalo ehlobo.